‘हाम्री तलेजु–भवानीको गहना फर्काऊ’- फिचर - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ ३०, २०७८ श्‍वेता बानियाँ
काठमाडौँ — अहिले सिकागोमा रातको साढे १० बजेको छ । नजिकै बेसबल खेल हेरेर म भर्खरै होटलमा फर्किएकी छु । म थाकेकी छु तर सुत्न पनि सकेकी छैन । जति सुत्ने यत्न गरे पनि तन्द्रामै म आफ्नो मनमुटु बिस्मित बनाउँदै सिकागोको आर्ट इन्स्टिच्युटतिरै पुगिरहेकी छु जहाँ मेरो देश, मेरो घरबाट चोरिएको एउटा सम्पदा प्रदर्शनीमा राखिएको छ ।
जहाँ मैले पूजाप्राथना गर्ने देवीको दुर्लभ गहना खुलेयाम प्रदर्शनीमा राखिएको छ ।
मैले सिकागो आर्ट इन्स्टिच्युट (म्युजियम)मा हिजैमात्रै तलेजु भवानीको हार (नेकलेस) देख्ने मौका पाएँ जुन हाम्रो हनुमानढोका सामुको तलेजु मन्दिरमा तलेजु भवानीको गलामा हुनुपर्थ्यो । सम्वत १७०० तिरका शक्तिशाली मल्ल राजा प्रताप मल्लले तलेजु भवानीलाई उपहारमा चढाएको मानिने यो हारको कुनै मूल्य छैन । बरु छ त हाम्रो सभ्यता र समय सम्झाउने कालिगढी र कौशल । तर, यो अमूल्य सम्पदा आज हनुमानढोका क्षेत्रमा होइन, सिकागोको म्युजियममा दिनहुँ सयौं र हजारौं आगन्तुकको आँखामा जँचिरहेको छ ।
मलाई यो तलेजु भवानीको गहना (हार) सिकागोमा राखिएको छ भन्ने कुरा ३ बर्षअघि थाहा भएको थियो । सिकागोबाट २ घण्टा ड्राइभमा पुगिने एक युनिभर्सिटीमा म पीएचडीको सोधार्थी भएकाले बितेको समयमा सिकागो म्युजियमसम्म पनि जान पाएकी थिइनँ । बरु केही साथीभाइहरु त्यहाँ पुगेर यो हार र अरु नेपाली सम्पदाको तस्बिर ल्याएर मलाई देखाइरहेका हुन्थे, म विस्मित हुँदै हेरिरहेकी हुन्थें । यति बर्षपछि आफ्नो पीएचडी पूरा गरेरमात्रै सिकागो आर्ट इन्स्टिच्युट जान सकें । अथवा भनौं, तलेजु भवानीले मलाई बोलाइन् ।
हिजो झण्डै २ घण्टा ड्राइभ गरेर सिकागो आउनासाथै म सिधै आर्ट इन्स्टिच्युट अफ सिकागोमा गएकी थिएँ । जसै इन्स्टिच्युटमा प्रवेश गरें, मैंले सुरुमैं ‘इन्डियन, साउथइष्ट एसियन एण्ड हिमालयन आर्ट सेक्सन’ चहार्न चाहें । यो सेक्सनमा छिर्नासाथै म मनमुटुमा कम्पित भइरहेकी थिएँ, सम्पूर्ण शरीर कुनै अज्ञात डरका कारण काँपिरहेजस्तो अनुभूत गरें । ओहो, त्यहाँ त हाम्रा देवीदेवताहरु थिए । हाम्रो काठमाडौं उपत्यकामा रहेका र मेरो पुस्ताले कथा–किंवदन्तीमा सुनेजस्ता देवीदेवता, गरगहना र सम्पदाहरु भित्ताभरी झुन्डिएका थिए । भगवान बुद्धको ठूलो मुर्ति मौनव्रतमा बसेझैं देखिन्थ्यो । मन्दिरै मन्दिरको मेरो काठमाडौं सहरका हरेक गल्ली–गल्छेडामा भगवानको बास रहेको हुन्थ्यो, आज ती भगवानहरु यता आएजस्तो ल्याइएजस्तो भान मलाई भयो । तर, यो अपनत्व र आत्मीयताले भरिएको मेरो सहर थिएन, यो मेरो मन्दिर थिएन । यो त फगत एउटा निर्जीव लाग्ने संग्रहालय थियो ।
म त्यही तलेजु हार हेर्न चाहन्थें, जसलाई सावधानीपूर्वक एउटा सिसाको बाकसमा सजाएर राखिएको थियो । जब मैले पहिलोपटक यो तलेजु हारलाई देखें, म एकाएक भक्कानिन पुगें । मेरो प्रिय देवी तलेजु भवानी सम्झेर त्यही गहनाका सामु हात जोर्दे म रोइरहें, केहीबेर । यसरी मेरो भगवानको गहना यो पराइ ठाउँमा प्रदर्शनीमा राखिएको देख्दा म मेरो अमूल्य सम्पदा कसैले बिनाकारण र बिनाअधिकार मबाट खोसेर लगेको बोध गर्दै थिएँ । यही हार गहनाको तलतिर सानो र अनौठो टिपोट लेखिएको थियो—‘एल्सरड्रोफ फाउन्डेसनको उपहार ।’
अनि मैंले गुगल गरें— एल्सरड्रोफ फाउन्डेसनबारे । केही सूचना मिल्यो पनि । तर, यो हाम्रो पुरातात्विक सम्पत्ति यो फाउन्डेसनले कसरी पायो ? कसरी यो गहना चोरियो ? कसरी ल्याइयो अथवा कति पैसामा खरिद गरेर लिलामी हुँदै यो सम्पत्ति यहाँ आइपुगेको हो ? सन् ७० को दशकमा काठमाडौंबाट हराएको भनिएको गहना यति लामो समयसम्म किन र कहाँ लुकाइएको थियो ? यस्ता सहस्र प्रश्नहरु मेरो मनमा छाइरहे, आइरहे ।
तलेजु भवानी सम्पदाको यो हालत सम्झेर म आवेगमा थिएँ, अन्यौलमा थिएँ । अनेक रहस्यले भरिएका हाम्रा देवी–देवता, हाम्रा आस्था–धरोहरका बारेमा सोचमग्न बनेकी थिएँ । तलेजु मन्दिर आफैंमा वर्षमा एक दिन (दसै‌को नवमीमा) खोलिने रहस्य र इष्टदेवीका रुपमा मानिने भवानीमाथिको मेरो गहिरो आस्थाकै कारण पनि म विचलित बनेकी थिएँ ।
हिजो तलेजु भवानीको गहना म्युजियममा देखेपछि र भवानीको सम्पत्ति, उनको अंश, उनको उपहार चोरिँदै, लिलामीमा पर्दै र हजारौं आस्थाहिन आँखाहरुका नजरमा पर्दै यसरी प्रदर्शनीमा राखिएको देख्ता म हृदयदेखि रोएकी थिएँ । अझै पनि मेरो गह ओभाएको छैन । हो, मलाई तलेजु भवानीले नै यहाँसम्म बोलाएकी हुन् र संसारसामु भन्न अहृाएकी हुन्- ‘म चोरिएर, लुटिएर यहाँसम्म आएकी छु, मलाई मेरो घर लैजाउ ।’
यसरी चोरिएको पुरातात्विक सम्पदालाई ‘डिस्प्ले’मा राखिनुहुन्न र तत्कालै यसलाई ‘उत्पत्तिको मुलुक’मा फर्काइनुपर्छ भन्ने युनेस्कोसहितको स्पष्ट प्रावधानलाई पनि यसरी नाम चलेका इन्स्टिच्युट र म्युजियमहरुले ‘इग्नोर’ गरिरहेको देख्ता म झनै अचम्ममा परेकी छु ।
हो, यसकारण सिकागोको आर्ट इन्स्टिच्युट, युनेस्को, वासिङटनमा रहेको नेपाली दूतावास र काठमाडौंमा रहेको अमेरिकी दुतावाससहितले हाम्रो तलेजु भवानीको गहनालाई पुरातत्वकै परिभाषामा भए पनि घर फर्काउन तत्काल पहल थाल्नैपर्छ । तलेजु हाम्री आस्था हुन्, हाम्री प्राथना हुन् । कृपा गरेर, हाम्री तलेजुको गहना उनै तलेजुलाई फर्काइदेउ ।
(बानियाँ अमेरिकाको भर्जिनिया टेक युनिभर्सिटीमा अंग्रेजी बिषय प्राध्यापन गर्छिन् ।)
प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७८ १९:५३